Askari baajiyay masiibo Nuclear dagaalkii Qabooba oo geeriooday
Home WARARKA Askari baajiyay masiibo Nuclear dagaalkii Qabooba oo geeriooday
Mosco-(Berberanews)-Askari hore oo ka tirsanaan jiray ciidamadii midowgii soofiyeed oo in badan lagu ammaanay in uu baajiyay masiibo dhanka hubka niyuukleerka ah xilligii dagaalkii qaboobaa ee adduunka ayaa geeriyooday isaga oo da’diisu tahay 77 sano.
Waxa uu qaatay go’aan ah in digniintaasi ay tahay mid khalad ah, mana uusan ku wargelin madaxdiisa arrintaasi.
Go’aankaasi oo soo shaac baxay sanaddo kaddib ayaa loo arkaa in uu baajiyay dagaal la isu adeegsan lahaa hubka niyuukleerka.
“Waxaa I soo gaaray xog muujineysa in gantaallo nalagu soo riday. Haddii aan arrintaasi u gudbin lahaa madaxdeyda, ma jiri lahayn qof oran lahaa macluumaadkaasi waa kuwo khalad ,” ayuu yiri Petrov.
“Waxa kaliya ee aan sameyn karo ayaa ahayd in aan taleefoon kula hadlo dadka iga sarreeya ee madaxda ah balse sidaa ma aanan yeelin. Waxaan dareemay sida in aan ku fadhiyo dig aad u kulul,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Haddii uu si khalad ah u fahmay xogta ah in uu weerar ku soo wajahan yahay, gantaalka ugu horreeya ee Niyuukleerka ahi ayaa dalkaasi ku habsan lahaa daqiiqado kaddib
“23 daqiiqo kaddib waxaan ogaaday in wax weerar ah uusan dhicin. Haddii uu weerar dhab ah jiri lahaa, dabcan durbaba waan ogaan lahaa. Marka anigu waan nafisay,” ayuu yiri Petro.
Previous article“Aniga Dhinac Walba waa layga Eedeeyaa..” Xildhibaan Foosiya Yuusuf X. Aadan
Next articleItoobiya oo ku hawlan qorshe ay Dekeddaha Berbera iyo Sudan ugu soo wareejinayso ganacsigeeda